တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ တရုတျနိုငျငံတှငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ အကွမျး ဖကျမှုတနျပွနျနှိမျနငျးရေးလကျတှလေ့ကေ့ငျြ့ခနျး ADMM-Plus (VIP Program) တကျရောကျရနျထှကျခှာ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ထိုငျးနိုငျငံတှငျကငျြးပပွုလုပျသညျ့ ကာကှယျရေးနှငျ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာပွပှဲ (Defence & Security 2019) သို့တကျရောကျခဲ့သော တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ တရုတျနိုငျငံတှငျကငျြးပပွုလုပျမညျ့ အကွမျးဖကျမှု တနျပွနျ နှိမျနငျးရေး လကျတှလေ့ကေ့ငျြ့ခနျး ADMM-Plus (VIP Program) သို့တကျရောကျရနျအတှကျ နိုဝငျဘာ ၁၉ ရကျညပိုငျးတှငျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဘနျကောကျမွို့ရှိ သုဝဏ်ဏဘူမိလဆေိပျမှ တရုတျနိုငျငံသို့ ဆကျလကျထှကျခှာ ကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဦးဆောငျသညျ့မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ညှိနှိုငျး ကှပျကဲ ရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ)ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ထိုငျးနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးမြိုးမွငျ့ သနျး၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ)ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျဇျော၊ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောမှ Lt. Gen. Ekachai Harn poonvittaya နှငျ့ထိုငျးဘုရငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျအတှငျးပို့ ဆောငျ နှုတျ ဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ တရုတျနိုငျငံ၊ နနျနငျး အပွညျပွညျ ဆိုငျရာလဆေိပျသို့ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ ရောကျရှိကွရာ တရုတျပွညျသူ့ လှတျမွောကျရေးတပျမတျော၊ တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျးမှ ကွညျးတပျစဈဦးစီးအရာရှိခြုပျ Maj. Gen Li Zhi Zhong နှငျ့အရာရှိကွီးမြား၊ နနျနငျး မွို့ မွနျမာကောငျစဈဝနျခြုပျ ဦးစိုးသကျနောငျ၊ တရုတျနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောဦး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံစဈသံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei နှငျ့တာဝနျ ရှိသူမြားက ကွိုဆိုနှုတျဆကျခဲ့ကွပွီး နနျနငျးအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျမှတဈဆငျ့ ကှလေ့ငျ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာလဆေိပျ သို့ ဆကျလကျထှကျခှာကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဦးဆောငျသညျ့မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့သညျ ကှလေ့ငျ အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျသို့ ဒသေစံတျောခြိနျနံနကျ ၄ နာရီတှငျ ရောကျရှိကွရာ တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျး ကှပျကဲမှုဌာနခြုပျမှ လကျထောကျစဈဦးစီးအရာရှိ ခြုပျ Maj.Gen. Chen Mintian နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျကွိုဆိုနှုတျဆကျခဲ့ကွသညျ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြပွဲ (Defence & Security 2019) သို့တက်ရောက်ခဲ့သော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန် နှိမ်နင်းရေး လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း ADMM-Plus (VIP Program) သို့တက်ရောက်ရန်အတွက် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်ညပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့်မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲ ရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့် သန်း၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်မှ Lt. Gen. Ekachai Harn poonvittaya နှင့်ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်အတွင်းပို့ ဆောင် နှုတ် ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်နင်း အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိကြရာ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၊ တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်းမှ ကြည်းတပ်စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ် Maj. Gen Li Zhi Zhong နှင့်အရာရှိကြီးများ၊ နန်နင်း မြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးစိုးသက်နောင်၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံစစ်သံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei နှင့်တာဝန် ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီး နန်နင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှတစ်ဆင့် ကွေ့လင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ် သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့်မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ကွေ့လင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဒေသစံတော်ချိန်နံနက် ၄ နာရီတွင် ရောက်ရှိကြရာ တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်း ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ လက်ထောက်စစ်ဦးစီးအရာရှိ ချုပ် Maj.Gen. Chen Mintian နှင့်တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။